सुनचाँदीको भाउमा दिनानुदिन बृद्धि ,कतिमा कारोबार हुदैछ आज? – Himalipress
सुनचाँदीको भाउमा दिनानुदिन बृद्धि ,कतिमा कारोबार हुदैछ आज?
हिमाली प्रेस । १८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ११:५३
काठमाडौं। सुनचाँदीको भाउ बढ्नेक्रम मंगलबार पनि जारी रह्यो। सुन तोलामा ३०० रुपैयाँले बढेको छ भने चाँदी पनि तोलामा १० रुपैयाँले बढेको छ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले मंगलबारका लागि छापावाल सुनको भाउ तोलाको ९४ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गरेको छ।
सोमबार ९४ हजार २०० कायम गरिएको थियो, आइतबार ९४ हजार थियो। यस्तै, तेजाबी सुनको भाउ पनि बढेर तोलाको ९४ हजार पुगेको छ। मंगलबार चाँदीको भाउ पनि तोलामा १० रुपैयाँले बढेर तोलाको १३ सय ७० पुगेको महासंघले जनाएको छ।
ठाकुर र महतोसहित चार नेता जसपाबाट निस्कासित
१८ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ११:५३
काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पार्टीका चार जना नेतालाई निष्काशित गरेको छ। जसपाका उपेन्द्र यादव पक्षले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित चार नेतालाई पार्टीबाट निस्काशन गरेको हो। बालकुमारीमा बसेको कार्यकारिणी सभाको बैठकले उनीहरूलाई निष्काशन गरेको नेता इस्तियाक राईले जानकारी दिए। निष्कासनमा पर्नेहरूमा अध्यक्ष ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, सर्वेनन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्ण […]
१३ जेष्ठ २०७८, बिहीबार १२:३६
सरकारले बजेटमा मतदाता प्रभावित गर्ने कार्यक्रम नराख्न: पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह